China Aluminum CNC Machining Parts warshad iyo alaab-qeybiyeyaal |BAASILE
BMT waa shirkad Shiinees ah oo CNC Machining ah, oo bixisa adeegyo sax ah oo qiimo jaban leh sida hoos ku xusan:
▶ Adeegyada Mashiinnada ee CNC
▶ Adeegyada Milling CNC &Adeega leexashada
▶ Mashiinnada CNC ee gaarka ah iyo Milling CNC
▶ Mashiinnada CNC ee saxda ah iyo Milling CNC
▶ CNC Birta Machining
▶ Mashiinka CNC naxaasta
▶ Mashiinka Carbon Steel CNC
▶ Mashiinka CNC-da aan-Aamiga ahayn
▶ Mashiinka CNC caaga ah
▶ Mashiinnada Alloy CNC
▶ 3 dhidibkii CNC Machining
▶ 4 dhidibkii CNC Machining
▶ 5 dhidibkii CNC Machining
▶ Mashiinnada dhidibada badan
▶ Qaybaha CNC Machined
▶ Prototype CNC Machining, iwm.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad badbaadiso qiimaha mashiinada oo aad hagaajiso tayada alaabta anagoo adeegsanayna Mashiinka Caadiga ah iyo Saxnaanta Casriga ah ee 3-5 faashas CNC Machining iyo CNC Milling, iwm.
Waxaa naga go'an inaan ku siino alaabta ugu fiican ee CNC lagu farsameeyo iyo adeegyada mashiinada CNC ee qaraabada ah oo qiimahoodu u badan yahay.
Anagoo ah shirkad mashiineed sax ah oo CNC ah oo ku jihaysan macmiilka ee Shiinaha, waxaanu sii wadeynaa hagaajinta joogtada ah ee qaybahayada mashiinada caadiga ah iyo adeegyada farsamaynta gaarka ah.
Marka aad u baahan tahay hogaanka sare ee China CNC machining soo saaraha ku takhasusay machining sare CNC saxan, CNC-shiidid iyo CNC jeestay, kooxdayada aadka u-xirfaan kartaa soo saari kara qaybaha dulqaad ugu adag oo aad qalab our, sida xarumaha machining CNC, CNC leexo warshad. Lathes, xarumaha CNC iyo mashiinada EDM ee fiilada.
Waxaan ku takhasusay samaynta Mashiinnada CNC ee Custom, Milling CNC, CNC Rogista, Mashiinka saxda ah ee CNC, Qaybaha Mashiinnada CNC, Qaybaha Mashiinnada CNC, Qaybaha Wareejinta CNC
Iyada oo la adeegsanayo xarumaha saxda ah ee saxda ah ee CNC Machining, CNC lathes, CNC weel-wareejin-shiid kiimikaad, mashiinada EDM ee fiilada iyo qalab kale oo badan oo wax soo saarka mashiinada sare, waxaan xamili karnaa amarrada ilaa malaayiin qaybood.
▶ Ikhtiyaarada badan ee qalabka mashiinada si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha;
▶ Iyadoo la raacayo oraah qiimo-ku-ool ah oo sarreeya, waxaan ku garab taagannahay tayada alaabadayada.
▶ Jawaab celinta degdega ah ee adeegga macaamiisha, waxaanu ku faanaa habkayaga shakhsi ahaaneed ee macaamiisha.U heellan inaad noqoto lammaanahaaga muddada dheer, ma aha kaliya alaab-qeybiye.
Warshadodee ayaan u adeegnaa?
Badeecadahayada mashiinka CNC-da ayaa horay loogu isticmaalay warshado kala duwan, sida elektiroonigga, caafimaadka, baabuurta, badda, beeraha, qalabka mashiinka, semiconductor, dhiig-miirashada saliidda, tamarta, cuntada, tignoolajiyada sare, militariga, iwm.
Waa maxay Agabkayada la shaqayn karo?
Waxaan mashiinka u samayn karnaa labada qaybood ee Birta & Caagagga.Qalabka birta ah waxaa ka mid ah Aluminium, Brass, Copper, iyo Stainless Steel, sida AL5052, AL6061, AL7075, SUS303, SUS304, SUS316, 316L, LY12, 65Mn, Cr12, 40Crlite, AL6025, 40Crlite. POM, Nylon, Teflon iyo Acrylic, iwm.
Sidee Nooga Heli Karaa Xigashada Iibka?
Fadlan noogu soo dir qaybtaada sawiro ama muunado ay ku jiraan shuruudahaaga faahfaahsan email ahaan noogu soo dir.Qaab sawirku wuxuu noqon karaa 2D ama 3D sida JPG, PDF, DWG, iyo STP.Kadib waxaan kuu diyaarin doonaa oraah kharash-ku-ool ah 48 saacadood gudahood.
Marka loo eego ilaalinta dukumeentiyada qarsoodiga ah ee macluumaadka sawirka macaamiisheena, waxaan ixtiraameynaa hantidaada aqooneed la'aanteed ogolaanshahaaga qoran, marnaba daaha ka qaadi doono sawiradaada iyo macluumaadka kale cid kale oo saddexaad.Haddii aad leedahay NDA (Heshiiska Qarsoon), kaliya noo soo dir annaguna waanu saxeexi doonaa oo ku soo celinaynaa.
Nala soo xidhiidh hadda mashruucaaga farsamada ee CNC.Waxaad mar walba filan kartaa dareenkayaga degdega ah.Waxaan rajaynaynaa inaan idinla samayno xidhiidh ganacsi oo guulaystay oo muddo dheer socday.Ma doonayno oo kaliya inaan noqono soo saaraha iyo alaab-qeybiyahaaga gaarka ah ee qaybaha mashiinada CNC, laakiin sidoo kale lamaanahaaga la isku halayn karo ee Shiinaha ee soo saarista mashiinada CNC.Sawirro iyo muunado soo dhawoow.
Hore: Adeegyada Warshadaynta Birta xaashida
Xiga: Adeegga Mashiinnada Gaarka ah ee CNC
Mashiinka Daawaha iyo CNC
Qaybaha Mashiinka Milling CNC
Soo-saare Qaybaha Mashiinnada Xirfadleyda ah
Qaybaha Mashiinada Saxda ah, Cnc Titanium Machining, Machining sax ah, Makiinada, Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey, Mashiinka gaarka ah,